Nalalka & Laydhka Wararka iyo Sheekooyinka by Alietc.com - Alietc.com
United Airlines Waxay Ka Bixinaysaa Kaarboonka 2050
Si dib loogu habeeyo kaarboon laba ogsaydhka hawada oo si buuxda loo nadiifiyo qiiqa kaarboonka sanadka 2050, shirkadda diyaaradaha ee United Airlines ayaa lagu wadaa inay adeegsato tikniyoolajiyad, iyadoo lagu saleynayo aqoonta raadadka kaarboonka iyo barnaamijyada qiiqa gaaska lagu sii daayo. Shirkadda oo xarunteedu tahay magaalada Chicago, ayaa maal-gelinaysa dhowr milyan oo doolar oo ay iska kaashadeen iskaashatooyinka Batroolka Occidental iyo Rusheen […]Read More
Soo-saareyaasha Laydhka Fiidiyowga Xirfadle ee Farsamaysan
Waxaa jira boqolaal shirkado qalab xirfadlayaal ah oo maqal iyo muuqaal leh oo laga helo internetka maanta. Waxaad si fudud ku heli kartaa iyaga oo ku sameeya baaritaan fudud Google iyo daalacashada degellada kala duwan. Ujeeddooyinka maqaalkan, waxaan diirada saarayaa alaab-qeybiyeyaasha qalabka nalalka fiidiyowga maqalka leh. Tani waa muhiim! Haddii […]Read More
Xagee Laga Helaa Alaabada Nalka?
Waxaa jira qaabab badan oo lagu rakibo nalalkaaga. Mid ka mid ah kuwa ugu fiican ayaa ah in lala shaqeeyo nooca nalalka iyo dhawaaqa, khibradaha, iyo rakibayaasha nalalka hibada leh. Maqaalkan, waxaan ka wada hadli doonnaa qaar ka mid ah xulashooyinka aad kala dooran karto. Waxaad ka heli kartaa alaab-qeybiyeyaal ku habboon suuqa kuwaas oo ah […]Read More
Shirkadaha Nalalka Iftiinka Dibadda ee Nalalka
Nalalka LED-ka ee dibedda ku habboon gurigaaga ma ku habboon yihiin? Jawaab: Dabcan, haa! Markaad iibsaneyso guri, waxaad dooneysaa inaad hesho fursadaha nalalka ee ugu fiican, taas oo macnaheedu yahay inaad isticmaaleyso laydhadh tayo sare leh. Iftiinka bannaanka ayaa ah wax aad u baahan doontid haddii aad ku nooshahay aag ay diiran tahay inta lagu guda jiro […]Read More
Sidee Encapsulation u Shaqeysaa Laydhka Nalalka
Kahor intaadan dooran shirkadda nalka iyo korontada siisa, tixgeli taxanaha encapsulation LED. Liistada alaab-qeybiyeyaasha suurtagalka ah waxaa ka mid noqon kara shirkado bixiya LED-ka oo ku takhasusay xiritaanka, qeybiyeyaasha xayeysiinta LED-ka iyo lifaaqyada LED-ka, iyo alaabada guryaha dhexdeeda ah ee lagu xirayo xirmooyinka iyo xirmooyinka. Way adkaan kartaa in la ogaado waxa ku duugan marka laydhadhku […]Read More